Masinina - Mpanamboatra masinina any Shina, mpamatsy
Milina famolavolana vovoka mandeha ho azy (SUKO-20T-05)
Milina famolavolana vovoka mandeha ho azy (SUKO-3T-01)
Milina famolavolana vovoka mandeha ho azy (SUKO-60T-05)
Polymer Vertical Type Tube Ram Extruder Machine PFG600 ho an'ny Polymer PTFE Tube Dia 300mm-600mm
Mampiavaka ny Tube Ram Extruder PFG600 Amin'ny alàlan'ny fanatsarana tsy tapaka, ny fitaovana dia marani-tsaina kokoa, milamina kokoa ary mahomby kokoa. Ny fitaovana dia fehezin'ny rafitra PLC, ary mandeha ho azy miaraka amin'ny fandidiana tsotra. Miaraka amin'ny famolavolana samihafa, ny fitaovana dia afaka mamaly ny filan'ny mpampiasa isan-karazany, ary azo atokana ho an'ny mpanjifa. Mihazakazaka maharitra ny fitaovana, miaraka amin'ny tabataba ambany. Ary mampihena ny vidiny amin'ny fitsitsiana herinaratra sy angovo mandritra ny fikojakojana ny tsindry. Namboarina ny fitaovana sy ny bobongolo ...
Masinina fantsona mitafo poakaty PTFE
Fitaovana milina fantsom-boasary: ​​380V, 1.5KW, fanaraha-maso matetika, ho an'ny famokarana ny savaivony ivelany amin'ny OD an'ny 10mm ka hatramin'ny 50mm, hosotra mifangaro Wallthickness 1-2MM PTFE. Ny milina fantsom-pifandraisana PTFE dia mandray heater hafanana, ny mari-pana fanafana dia mety ho + -1 degre, olona iray afaka miasa milina roa, raha toa ka misy 15/5 PTFE mifangaro volo isaky ny 15-35 metatra.